Thursday September 13, 2018 - 12:06:56 in Wararka by Super Admin
Max'med Mursal ayaa shiriyay ragga ugu cadcad in ay Shariif Sakiin dhinac uga riixaan maamulka Fadhiidka ah ee ciidamada Itoobiya ku waradiyeeyaan magaalada Baydhabo.
Kulanka waxaa kasoo muuqday Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur oo sanad ka hor isku dhiibay ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalada Xudur kadibna heshiisyo lagalay saraakiil Mareykan ah.
Max'med Aadan Fargeete wasiirkii hore ee Maaliyadda Dowladda Federaalka oo kulanka qeyb ka ahaa ayaa kamid ah siyaasiyiinta ay wataan Farmaajo iyo Kheyre si uu ula loolamo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo khilaaf xooggan kala dhaxeeyo hoggaanka dowladda.
inkasta oo uusan Mukhtaar Rooboow iclaamin in uu yahay musharax u taagan madaxtinimada Koonfur Galbeed hadane wasiirro iyo xildhibaanno ayaa sheegay in uu yahay musharax ay wataan saraakiil caddaan ah.
Bisha November 2018 ayaa lafilayaa in musharraxiinta uu ku jiro Rooboow ay Baydhabo uga qeyb galaan doorashada murunka badan uu hareeyay, ilo wareedyo ayaa sheegaya in horraanta isbuuca soo socda ay siyaasiyiinta uu shiriyay Max'med Mursal ay udhoofi doonaan Baydhabo halkaas oo ay ka bilaabayaan ololaha doorashadooda.